खोज बिशेष – Sidha Patra
दाङमा चितुवाको छाला र अफिम सहित दुई जना पक्राउ
दाङ लमहीका दुई महिलालाई चिठ्ठा पर्याे भनी इमो मार्फत ठगि गर्ने तीन जना पक्राउ
दाङ । दाङको लमही नगरपालिका वडा नम्बर ५ निवासी दुई जना महिलालाई इमो मार्फत चिठ्ठा पर्याे भनेर ठगि गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल इमो मार्फत लट्रि प¥यो भनेर ठगी गर्ने तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा रौतहट जिल्ला दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर ६ निवासी १८ बर्षीय […]
काठमाडौं । लामो समयदेखि हराएको भनिएको नेपाल र चीन सीमा छुट्याउने ११ नम्बरको नेपाल–चीनबीचको सीमास्तम्भ भेटिएको छ । सीमा अनुगमन टोलीले नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ टाकुलेमा सीमास्तम्भ फेला पारेको हो । चार वर्ष अघि पनि सो सीमास्तम्भ हराएको कुरा बाहिर आएको थियो । कहिलेदेखि हराएको हो,वा खोजी नै भयो कि भएन, त्यो पनि निश्चित […]
प्यूठान प्रवेश गर्न सीमामा २४ सै घण्टा युवा परिचालन
प्यूठान । सरुमारानी गाउपालिका २ ददेरीका स्थानिय युवा आकाश भुसाल दाङ ( प्यूठानको सीमावर्ती गहनाखोला पुलको मुखमा पाल टांगेर राखिएको वेटिङ क्वारेन्टाईन र हेल्थ डेस्कमा दिनहुँ खटिन्छन् । दिनरात नसुतेर जिल्ला भित्रनेहरुको तीन पुस्ते विवरण, ठेगाना,सम्पर्क नम्बर, काम गरेको ठाउँ सबै अभिलेख राख्छन् । स्वयंसेवीहरुले अनावस्यक रुपमा हिडदुल गर्नेलाई रोक्दै क्वारेन्टाईनमा राख्छन् । संबन्धित गाउँपालिकासंग समन्वय […]
दरवारका एक्ला रक्षक : जो बेतलवी संरक्षणमा सक्रिय छन्
सलिम अन्सारी । प्यूठान नगरपालिका ४ का डालबहादुर थापामगरको उमेर ७९ बर्ष पुुुगिसक्यो । बुढ्यौलीले ढाड कुप्रो परिसकेको छ। शरीरमा तागत छैन। तै पनि उनी सकी नसकी सडक छेउको झारपात उखेलिरहेका भेटिन्छन।भत्केको सडकमा ढुंगामाटो लगेर टालटुल गरिरहेका देखिन्छन्। नेपाल एकिकरण हुनुअघि प्युठान राज्यमा तत्कालीन चन्दवंशी राजाहरुको रजगज थियो। राजधानी थियो यहि भित्रीकोट राज्य, यो चौबीसे […]
राहत स्वरुप रोजगार, मजदुर भन्छन् ‘अब चुल्हो बल्ने भयो’
दाङ । लमही नगरपालिका वडा नम्बर २ रनियापुर निवासी ओम प्रकाश चौधरी दैनिक अरुको मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आईरहेका छन् ।उनी २ बर्ष अघि बिदेशमा पनि सोचेजस्तो आम्दानी नभएपछी घर फर्किएका हुन् । उनका २ छोराछोरी गरि ४ जनाको परिवार छ । दैनिक मजदुर गरेर पेट पाल्ने चौधरीको परिवारलाई त ‘लकडाउन’ निल्नु न अोकल्नु भयो […]
स्वादीलो ‘बनको काफल बनकै चरीलाई’
गुल्मी । मौसमी पल अनुसार काफल पनि एक स्वादिलो फल हो । यस फलको बारेमा कलाकारहरु पनि गीत लेखेका थिए । काफलको बारेमा लेखिएको गीत ‘बनको काफल बनकै चरीलाई’ यसवर्ष गीतमा भनेजस्तै भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट बच्न लक डाउनले गर्दा साच्चै नै बनको कफल बनको चरीलाई भएको छ । काफल टिपेर […]
मजदुरको भोक मेटाउदै सोनाली
दाङ । दाङ्गको लमही नगरपालिका वडा नम्बर ४ निवासी सोनाली पुन मगर, पछिल्लो समय सामाजिक सेवामा समर्पित नाम हो । उनी दैनिक अति बिपन्न तथा मजदुरहरुकै बारेमा सोच्छिन् । मजदुरको पिडालाई सम्झिन्छिन् । खाना पाए कि भोकै प्यासै छन भनेर चिन्तित बनिरहन्छिन। मजदुरको तथ्याङ्क बुझ्न वडा कार्यालय धाउँछिन् । तथ्याङ्क अनुसार उनको तयारी हुन्छ । […]
लकडाउन प्रभाव : पोल्ट्री व्यवसायीलाई लगानी डुब्ने चिन्ता
प्युठान : झिमरुक गाउपालिका–६ चिसाबाङ्गका लेयर्स कुखुरापालक ईश्वरी प्रसाद पोख्रेलको फार्ममा झण्डै १५ हजार लेयर्स जातका कुखुरा छन। दैनिक डेढ टन दाना खपत हुन्छ। दैनिक ४२ पेटि अण्डा उत्पादन हुन्छ। सामान्य अवस्था भए उनले उत्पादन गरेका अण्डा बजार पुगिसक्थे।तर, उनले अण्डा नबिकेपछि फार्ममै थन्क्याउँदै आएका छन् ।’ बन्दाबन्दी नहुँदा सम्म प्रती पेटि २ हजार २ […]
साहना छिन् र पो यी कुकुरले भोकै बस्नु पर्दैन!
दाङ । चेतनशील छ मान्छे । उ जसोतसो बाच्न सक्छ, आफै खान सक्छ, दुख व्यक्त गर्न सक्छ, बोल्न सक्छ । तर सडक, बजार, मन्दिरमा रहेका छाडा गाई, बाँदर, कुकुर, पंक्षीहरुले के खाए होलान? खाना नपाएको कत्ति दिन भयो होला? बोल्न सक्ने भए माग्ने थिए, रुने थिए, भोकको पिडा सुनाउने थिए । टुलुटुलु हेरि बसेका होलान्, […]